गुरुङ सम्पदा पदयात्राः किन जाने क्होलसोंथर ? – Highlights Tourism
मिलन तमु गुरुङ
नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि लोकप्रिय बन्दै गएको होमस्टेको सुरुवात गुरुङ गाउँहरूबाट भएको हो । खासमा उनीहरूको संस्कृति र सभ्यतालाई हेर्नकै लागि धेरैले गुरुङ बस्तीहरू रोजे, त्यसमा प्राकृतिक सुन्दरता थियो नै । हो, त्यही गुरुङहरू समुदायको सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएको ठाउँ क्होलसोंथर हो ।
यस पदयात्राका मुख्य आकर्षणहरू
– क्होल स्वाँप्रे ट्हो भनेर समेत चिनिने यो ठाउँ जाँदा बाटामा पर्ने घलेगाउँ, भुजुङ, पसगाउँ, सिक्लेस र ताङतिङ जस्ता गुरुङ बस्तीहरूको होमस्टेको स्वाद लिन ।
– गुरुङको सांस्कृतिक अवयवहरू घाटु, सोरठी, कृष्ण चरित्र, पच्यु, घ्याब्रेको नाच हेर्न ।
– पुरातात्विक महत्त्वको स्थानबारे जानकारी लिन ।
– मनोरम हिमश्रृंखला, हरिया पहाड, खर्कहरूमा फुलेको लालीगुराँस, वन्य जन्तु तथा चराचुरुङगीहरु तथा बाली झुल्दै गरेका बेँसीहरूको अवलोकन गर्न ।
– लेकाली गोठाला जीवनलाई आफैले अनुभूत गर्न ।
गएको साल तमु धिं, युकेले गुरुङहरूको यो अदिम् थलोमा जाने एउटा कार्यक्रम बनाएपछि मलाई पनि हुटहुटी जाग्यो । युकेको व्यस्त समयलाई केही दिन पन्छाएर पुग्ने चाह बढ्यो । पेसाले फोटो पत्रकार भएकाले यात्रामा फोटो खिच्न पाइने सोचले रोमाञ्चित बनायो ।
यस पटक आफ्नै गाउँठाउँमा पर्यटकको रूपमा जाने निधो गरियो । २८ जनाको टोलीमा मिसिइयो । क्होलसोंथर लमजुङको घलेगाउँ–भुजुङ, घनपोखरा, पसगाउँ हुँदै जान सकिन्छ भने कास्कीबाट सिक्लेस, ताङतिङ् र याङ्जाकोट भएर पनि जान सकिन्छ । यस पटक लमजुङबाट गएर कास्कीबाट फर्कने योजना बनायौँ ।
काठमाडौँबाट हामी पहिलो दिन लमजुङको घलेगाउँ पुग्यौँ । काठमाडौँबाट करिब ६ घण्टाको बस यात्रामा लमजुङको सदरमुकाम बेंशीसहर पुगिन्छ । त्यहाँ खाजा खाएर केही समय अवलोकन गर्दा पनि हुन्छ । त्यसपछि करिब डेढ घण्टाको उकालो जिपमा उक्लिएपछि चर्चित होमस्टे घलेगाउँ पुगिन्छ ।
त्यसैको छ दिने यात्रा विवरण जो सुकै पर्यटकको रूपमा जान चाहनेलाई सजिलो होस् भनेर यहाँ दिएको छु ।
घलेगाउँको होमस्टेमा फुलमाला पहिर्‍याएर स्वागत गरे, खाजा खुवाए । हामीले साँझको सूर्यास्तदेखि वरिपरि झन्डै ३६० डिग्रीको हिमालय रेञ्जको अवलोकन गर्‍यौँ । घलेगाउँमा प्राकृतिक रूपमा मनोरम मात्र छैन, त्यहाँ देखाइने गुरुङ संस्कार र संस्कृतिले जो कोहीलाई पनि लाभ्याउँछ ।
घाटु, स्वरठी, कृष्ण चरित्र जस्ता मौलिक नाचहरू हेरेपछि हामी मिठो निन्द्रमा पर्यौं । भोलि बिहानै हामीले त्यहाँ भ्यूटावर, घले राजाको सालिक तथा फुटबल मैदानको अवलोकन गर्‍यौँ ।
दोस्रो दिन बिहानको नास्तापछि भुजुङतिर लाग्यौँ । भुजुङ जानका लागि नायुको डाँडै डाँडा जानु पर्छ । नेपाली मूलका अस्ट्रेलियाका अर्बपति शेष घले जन्मेको र हुर्केको यही नायुमा हो । त्यही डाँडाको शिरमा घनपोखरा पर्छ । तर, हामी घनपोखरातिर लागेनौँ, भुजुङ जानु छ । भुजुङ गुरुङहरूको घना बस्ती हो । झन्डै ५ सय घर झुपुक्क रहेको भुजुङको सरसफाइ तथा रहनसहन उदाहरणीय छ ।
हामीले भुजुङमा दिउँसोको खाना खायौँ । स्थानीय खानाको स्वादै वेग्लैछ । पहिला हिँडेर जानु पर्थ्यो, अहिले भुजुङसम्मै जिप जान्छ । भुजुङमा पनि हाम्रो सम्मानमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू देखाइए । भुजुङबाट तल मिदिम खोला झरेर फेरी माथि खर्कतिर चढ्दाको आनन्द बेग्लै छ । खर्कहरूमा पुग्ने बेला लाली गुराँस रातो मात्र होइन, रङ्गीबिरङ्गीका देखा पर्छन् । मनोरम हिमश्रृंखलाको दृश्यहरू हेर्दै लेकाली पाखो, खर्क र डाँडाहरू चढ्नु कम्ता रमाइलो थिएन । त्यो दिन हामीले समिरो कुनामा बास बस्ने निधो गर्‍यौँ ।
आजको दिन खास दिन हो । हामीले आज ३३०० मिटर अग्लो पहाड चढ्नु छ । पहाडी क्षेत्रमा हिँड्दा हुने मज्जा त छँदै छ, अझ जति उचाइमा गयो हिमश्रृंखलाहरु त्यति नै नाकैमा ठोक्किन आइपुग्छन् । आजको बास हाम्रो नासी खर्कमा हुनेछ । यहाँ पुग्न काब्रो पहाडबाट केही तल झर्नु पर्छ । यो खर्क बर्खाको बेला बस्तुभाउ पुर्‍याउने ठाउँ हो । गोठ भएको बेला जाने हो भने गोठमै पनि बस्न मिल्छ । तर, हामी ठुलै समूहमा भएकाले टेन्टहरू लगेका थियौँ । त्यही गाड्यौँ र बस्यौँ । अर्को विशेषता भनेको यस क्षेत्रमा रङ्गीबिरङ्गी गुराँस फुल्छन् । नेपालको राष्ट्रिय फुलको दर्जा पाएको यो लाली गुराँस साँचिनै मन मोहक छ ।
आज क्होलसोंथर पुग्ने दिन हो । बिहानै देखि हाम्रो समूहका सदस्यहरूमा उमङ्ग छ । आफ्नो पुर्खाले आवध गरेको भूमिमा पुग्न को लालयित नहोला र? अझ क्याम्रिज विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले यसको ऐतिहासिकता र पुरातात्विक महत्त्वलाई उजागर गरेको छ ।
नासी खर्कबाट क्होल पुग्न केही घण्टा ठाडै उकालो चढ्नु पर्छ । तर, गन्तव्यमा पुग्ने हुटहुटीमा यसको पर्बाह हुँदैन । हामी दिउँसोतिर क्होल पुग्यौँ । क्होलमा देखिएका भग्नावशेषहरूले साँच्ची नै गुरुङको सभ्यताको विकास यहाँ भएको हो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्यो । म कुनै पुरातत्वविद् वा इतिहासकार होइन तर पनि मैले त्यहाँ जे देखेँ, ती सबै कुराको विकसित रूपमा नै हाम्रा बाबा आमाहरूले गाउँमा चलाएका र मेरो गाउँठाउँमा अझै चलन चल्तीमा रहेका चिजबिजहरू हुन् । चौथौँ दिन हामीले हाम्रो डेराडण्ड त्यही जमायौँ । पुर्खाले बसोबास गरेको ठाउँमा बस्न पाउनुलाई हामीले सौभाग्य नै सम्झ्यौँ ।
पाँचौँ दिन क्होलसोंथरबाट फर्कने दिन । हामीले जाँदा लमजुङबाट गएका थियौँ । फर्कँदा कास्कीबाट फर्कने विचार गर्‍यौँ । मुलुककै पहिलो होमस्टे सिक्लेसका लागि हामी हिड्यौं । तर, बाटो निक्कै जोखिमपूर्ण र अप्ठ्यारा रहेछन् ।
सिधै मद्क्यू खोला झर्यौं । मद्क्यु खोलाबाट फेरी सिक्लेस गाउँ चढ्नु छ । थाकेर चुर भइसकेका छौँ । यद्यपि सिक्लेस पुगेर थकाई मार्ने धोको छ । यहाँ पनि साँझ नाच गान र खानपान हुने नै भयो । रमाइलोमा समय बितेकै थाहै भएन ।
हामी हाम्रै कार्यक्रमहरूमा संलग्न भए पनि यात्रुहरूका लागि सिक्लेसबाट छैटौँ दिनको बिहान त्यस क्षेत्रको मनोरम दृश्यहरूको फोटो लिएपछि अर्को गुरुङ गाउँ ताङतिङ जाने की पोखरा आउने भन्ने विकल्प रहन्छ । थप एक दिनको समय छ भने ताङतिङ जान सकिन्छ । होइन, भने पोखराका लागि कच्ची रोडमा जिपमा आउन सकिन्छ ।
यसरी एउटा एतिहासिक तथा प्राकृतिक यात्राको मज्जा लिन सकिन्छ । कम चल्तीको बाटो भएकोले यात्रामा थप रोमाञ्चकता पाइन्छ । तर, तयारी भने गरेर जानु पर्ने हुन्छ । विशेष गरेर गुरुङ संस्कृति र सभ्यतालाई बुझ्न चाहने र पहाडी तथा हिमाली मनोरम दृश्यहरूको अवलोकन गर्न रमाउने यात्रुहरूको लागि क्होलसोंथर यात्रा रोमाञ्चक मात्र होइन, फलदायी पनि छ ।
के छ क्होलमा ?
क्होलसोंथर विशेष गरेर तीन वटा बस्ती मिलेर बनेको छ । त्यसैले गुरुङहरूले त्यसलाई क्होल साँप्रे ट्हो पनि भन्ने गरेको हो । गुरुङ भासमा सोंको अर्थ तीन र ट्होको अर्थ बस्ती भन्ने हुन्छ ।
त्यहाँको मूल बस्ती ठुलो छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो घरको भग्नावशेषलाई राजाको छोंज धिं भनिन्छ । गुरुङ भाषामा छोंज भनेको सभा हो र धिं भनेको घर हो । त्यसैले त्यही राजाको सभा हल रहेको विश्वास गरिन्छ । अलिकति पूर्वतर्फ पनि ठुलै बस्ती छ । पश्चिमपट्टिको बस्ती भने अलि सानो छ । त्यही पश्चिमको सानो बस्तीमा घले राजाको दरबार रहेको बताइन्छ । तीनै वटा बस्तीका भग्नावशेषहरू प्रशस्तै रहेका छन् । त्यहीबाट घरको बनावट, आकार प्रकारहरू थाहा पाउन सकिन्छ ।
पच्यु गुरु तथा अनुसन्धानकर्ता क्यारजंग गुरुङका अनुसार क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले त्यो बस्तीमा १२ सय वर्षअघिसम्म मानबबस्ती रहेको देखाएको छ ।
घरका भित्ताहरूमा तफुँ (तीन कुना हुने गरी ढुङ्गाले बनाएको दुलो) लाई झ्यालको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । त्यो अझै सग्लो देखिन्छ भने कतै त्यसलाई कलात्मक रूपमा कुँदिएको छ । त्यहाँ ढिकीको ओखल छ । तीन वटा पानी घट्टको अवशेष छ । एउटा ढुङ्गाको खाँवो छ । त्यसलाई कसैले राजाको घोडा बाँध्ने किलो भनेका छन् भने कसैले मौलो पनि भनेका छन् ।
बस्तीको माथिपट्टि एउटा ठुलो ढुङ्गा छ । त्यसलाई तीन वटा ओदानको खुट्टा जस्तो ढुङ्गाले अड्याएको छ । प्रा. डा. जगमान गुरुङले त्यसलाई जोखना हेर्ने ढुङ्गा भनेका छन् । कसैले यसलाई युद्ध कला अभ्यास गर्ने थलो भनेका छन् । यो ठाउँ ३५ सय मिटरको उचाइमा छ । करिब ३८ सय मिटरको उचाइमा च्योम्स्यो ङारा भन्ने डाँडा छ । त्यहाँ ठुलो ओडार छ । ओडारलाई ढुङ्गाको गाह्रो लगाएर बस्न लायक बनाइएको छ । च्याम्स्यो भनेको गुरुङ भाषामा झुमा हो । त्यो झुमाहरू बस्ने गुफा हो भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
केही पर ठुलो चौर छ । त्यसलाई घले राजाको घोडा दौडाउने चौरको रूपमा चिनिन्छ । यो चौरमा हेलिकप्टर समेत बस्न सकिन्छ । यही घनपोखरा, नायु, घलेगाउँ आदिको गोठ लगिन्छ । मूल बस्तीबाट च्याम्स्यो डाँडा पुग्नलाई दुई घण्टा र राजाको घोडा दौडाउने चौर पुग्नको लागि एक घण्टा हिँड्नु पर्ने हुन्छ ।
अर्को एउटा छुटाउनै नहुने चिज भनेको पानी घट्ट चलाउनका लागि पानी ल्याउन बनाएको नहर पनि हो । करिब १५/२० मिनेटको दुरीबाट नहर बनाएर पानी ल्याएको देखिन्छ । बस्तीमा खानालाई पुग्ने मूलको पानी भए पनि घट्ट चलाउन पुग्ने गरी छैन । यी सबै कुराहरूको अवलोकनले गुरुङ समुदाय त्यो ठाउँमै आधुनिक सभ्यताको विकास भएको देखिन्छ ।
कसरी गुरुङहरू आए त्यहाँ?
अनुसन्धानकर्ता एकिन्द्र गुरुङका अनुसार यस सन्दर्भमा एउटा किंबान्दतीलाई छ । त्यस बेला गुरुङहरू तिब्बतबाट बसाई सर्दै आएर मनाङको कुनै क्होल भन्ने ठाउँमा बस्थे । तिनै मध्येका दुई जवानहरू थारको पिछा गर्दै नागिम् भञ्ज्याङ कटेर आएछन् । उनीहरूले थारलाई बाण हानेर घाइते बनाएका थिए । पिछा गर्दै आउँदा अहिलेको क्होलसोंथरमा उनीहरूले त्यसलाई भेट्टाए । उनीहरूको बाणको टोक्रोमा उवा थियो । त्यो उवा उनीहरूले त्यहाँ छरेर गए । अर्को पटक सिकारको क्रममा आउँदा त्यहाँ उवा लहलह झुली रहेको थियो । उनीहरूले त्यही खबर गाउँमा लगे र बस्न योग्य ठाउँ भनेर बसाई सरे ।
Previous article सगरमाथा चढ्न चीनबाट सजिलो
Next article जलवीरे झरनामा क्यानोनिङ
क्होलासोंथरको थप अध्ययनअनुसन्धान गरिंदै